Abakhiqizi nabahlinzeki be-Dog Collars Harness Leashes | I-China Dog Collars Harness Leashes Factory
Icala le-Extra Bungee Retractable Dog Leash lenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu ze-ABS + TPR, ukuvimbela ukuqhekeka kwamacala ngokuwa ngengozi.
Sengeza ngokungeziwe i-bungee leash eyengeziwe ye-dog leash. Idizayini eyingqayizivele ye-bungee isiza ekutholeni ukushaqeka kokunyakaza okusheshayo lapho isetshenziswa nezinja ezinamandla nezisebenzayo. lapho inja yakho isuka ngokuzumayo, ngeke uthole ukushaqeka kwamathambo, futhi esikhundleni salokho, umphumela we-bungee we-leash elastic uzokwehlisa umthelela engalweni nasehlombe lakho.
Ingxenye ebaluleke kunazo zonke ye-leash ehoxiswayo yintwasahlobo. I-Extension Bungee Retractable Dog Leash enomnyakazo oqinile wentwasahlobo wokubuyisa kahle, kuze kube yizikhathi ezingama-50,000. Ifanele inja enkulu enamandla, izinhlobo eziphakathi nendawo nezincane.
I-4.Extra Bungee Retractable Dog Leash nayo ine-360° i-leash-free pet leash enikeza inkululeko eyengeziwe ezifuyweni zakho ukuhambahamba futhi ngeke uzisongele ngokuhola.
Inja Leash yangokwezifiso ehoxiswayo
Kukusiza ukuthi ubambe ukubambelela okuqinile ngokunethezeka, ngisho nasezinja ezinkulu ezidonsayo nezisebenzayo.
Umsebenzi osindayo wasentwasahlobo walesi siko esivuselelekayo senja ekwazi ukubhekana kalula nezinja ezinamandla kuze kufike kuma-110 lbs.
Icala le-Heavy Duty Retractable Dog Leash lenziwe ngezinto ze-premium ABS + TPR, ukuvimbela ukuqhekeka kwamacala ngokuwa ngengozi.
Lokhu kuthathwa kwe-leash okuhoxiswayo nge-tepi ye-nylon ekhanyayo engafinyelela ku-5M, ngakho-ke kuzoba ukuphepha okukhulu lapho usebenza nenja yakho ebusuku.
I-3.I-Heavy Duty Retractable Dog Leash enomnyakazo oqinile wentwasahlobo wokubuyisa kahle, kuze kube izikhathi ezingama-50,000. Ifanele inja enkulu enamandla, izinja eziphakathi nendawo nezincane.
I-4.I-Heavy Duty Retractable Dog Leash nayo ine-360° i-leash-free pet leash inika inkululeko ethe xaxa ezifuyweni zakho ukuhamba futhi ngeke uzisongele ngokuhola.
Ukholo lwenja yendwangu ekhanyayo lwakhiwe nge-nylon webbing kanye ne-mesh ethambile, ephefumulayo. Le khola ye-premium ayisindi futhi isiza ukunciphisa ukucasuka nokuhlikihla.
Ikhola yenja yendwangu ekhanyayo nayo yakhelwe ngezinto ezibonakalayo.kusiza ukugcina i-pup yakho iphephile ngokwandisa ukubonakala kwayo ngesikhathi sokuhamba ebusuku.
Le khola yenja ekhanyayo inezindandatho zekhwalithi ephezulu ze-D. Uma uphuma nomdlwane wakho, vele unamathisele i-leash kwindandatho yensimbi engagqwali bese uhambahamba ngokunethezeka nangokukhululeka.